Maldives ကို စျေးသက်သာအောင် ဘယ်လိုသွားမလဲ.
By : Thet Naing Swe
Maldives ကို စျေးသက်သာအောင် ဘယ်လိုသွားမလဲ.. 🌴💚🌳🥂💦🌸👙👙
ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် သုံးပေ လောက်ပဲမြင့်တဲ့ ဒီကျွန်းနိုင်ငံလေးဟာ သဘာဝတရားကပေးအပ်ထားတဲ့ သိပ်လှပြီး ကြည်လင်တဲ့ ပင်လယ်ကမ်းစပ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပေမယ့် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာပြီးရေခဲမြစ်တွေ အရေပျော်လာမူကြောင့် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မြင့်တက်လာပြီး နောက် နှစ်ပေါင်း 30 လောက်ကျ ရင် ပင်လယ်ရေအောက်ကို ရောက်သွားတော့မှာပါ…
သဘာဝတရားရဲ့ ဒဏ်ခတ်မူတွေ ကြောင့်ဒီရေတွေ နှစ်စဉ် တိုးလာမူတွေကိုလဲ ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းဖို့ နောက်ကျသွားခဲ့ပြီ.. ဒါကြောင့် ဒီနေရာလေး ကို ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က ခရီးသည်တွေက လာမယ့်နှစ် 30 အတွင်း ရေအောက်ကို မြုပ်မသွားခင် အပြေးအလွှားသွားလည်နေကြတာပေါ့. ..
အပေါ်က တစ်ပိုစ့်မှာ ကိုယ်ရေးခဲ့သလိုပါပဲ ..ဒီကျွန်းတွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်က နိဗာန် ဘုံလေးတွေပါ … သဘာဝတရားက လူတွေ အနားယူ အပန်းဖြေ ဖို့ ခနတာ ပေးအပ်ထားတဲ့ လက်ဆောင်တွေပေါ့.. ဒီနေရာလေးကို ရောက်ရင်ပြီးရော ဆိုပြီး မသွားစေချင်ဘူး… လေယာဉ် နှစ်ဆင့်စီးမှ ရောက်တဲ့နေရာကို ဖြစ်သလိုလေးသွားပြီး မပြန်လာစေချင်ပါဘူး… ဒါပေမယ့်ပေါ့လေ… ကိ်ုယ်တွေလို လူငယ်တွေအတွက်ကတော့ များပြားတဲ့ ငွေကြေးတွေကို မတတ်နိုင် ဒီနေရာလေးကို အရမ်းကို သွားချင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ သူတွေ အတွက် ကိုယ်သုံးရက်တာ အချိန်ဖြုန်းခဲ့တဲ့ ဒေသခံကျွန်းလေးနဲ့ လှပတဲ့ ပင်လယ်ကြီးထဲလျှောက်သွားခဲ့တာတွေကို ပြောပြပါ့မယ်.. resort မှာနေချင်တဲ့သူတွေ Maldives ဆိုတာ resort တစ်ခုရှိတဲ့ ကျွန်းတစ်ခုမှာ အခြေချနေလိုက်ပြီး ပြန်လာတာမျိုး မဖြစ်စေချင်ပဲ တခြားကျွန်းလေးတွေပါလျှောက်လည်ကြည့်ဖို့ သိပ်လှတဲ့ ရေအောက် ကမ္ဘာကို ကြည့်ဖို့ အတွက် ဒီလိုမျိုးသွားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ..
ကိုယ်သွားခဲ့တာကတော့ စျေးပေါတဲ့ ဒေသခံကျွန်း က ဟိုတယ်မှာ3ညနေခဲ့ပြီး ပင်လယ်ကြီးထဲထွက်ပြီး လည်လို့ရသမျှအကုန်လည်ခဲ့ ရေအောက်ကမ္ဘာကြီးထဲက ငါးမျိုးစိတ်ပေါင်းစုံကို သွားကြည့်ခဲ့တယ်.. ပြီးတော့မှ ကိုယ့်ရဲ့ 5star hotel Club Med Kani မှာ သုံးည လောက်အေးအေးဆေးဆေးသွားနှပ်ခဲ့တာ.. Club Med မှာလဲ Snorkeling လုပ်လို့ရပေမယ့် Maldives က Resort တွေတော်တော်များများက ပင်လယ်ထဲကို Snorkeling မလုပ်ခင် swimming test လုပ်တယ်.. ပြီးတော့ Resort ကြီးမှာနေတဲ့ အချိန်တော့ Blue Lagoon ထဲမှာပဲ ဇိမ်ကျနေချင်လို့ ဘယ်မှ မသွားချင်တဲ့အတွက် ပထမရက်တွေမှာပဲ အကုန်လျှောက်သွားခဲ့တော့တာ… တချို့ Resort တွေရဲ့ All Inclusive တွေမှာမပါတဲ့ ပင်လယ်ထဲထွက်တဲ့ ခရီးစဉ်တွေမှာလဲ Resort တွေမှာ ရောင်းတဲ့ စျေးနဲ့ ဒေသခံကျွန်းတွေမှာ ရောင်းတဲ့ Package တွေဟာစျေး အဆမတန်ကွာတဲ့ အတွက်လဲ.. ဒေသခံကျွန်းတွေမှာ အရင်နေတာ ပိုအဆင်ပြေပါတယ်.. ဒါပေမယ့် လူငယ် နဲ့လူရွယ်တွေ အတွက်ပဲ သင့်တော်တယ်.. လူကြီးတွေ နဲ့ မိသားစုလိုက်သွားမယ့်လူတွေ ကလေးတွေပါရင်တော့ လုံးဝ မသင့်တော်ပါဘူး..
စျေးသက်သာအောင် ဘယ်လိုသွားမလဲ ✈️
ရန်ကုန်ကနေ ဘန်ကောက် သို့ မလေးရှား transit နဲ့ Air Asia က Male လေဆိပ်အထိရောက်ပါတယ်. မလေးရှား transit နဲ့ဆို အသွာမှာ အချိန်တော်တော်စောင့်ရပြီး အပြန် transit ကတော့ တက်သုတ်ရိုက်ပြေးရမှာမို့ အဆင်မပြေပါဘူး.. ပြီးတော့ မလေးကနေ ထွက်တဲ့အချိန်နောက်ကျလို့ Male ကို ညမှ ရောက်တဲ့အတွက် ကျွန်းတွေဆီသွားဖို့ အဆင်မပြေလို့ Male မှပဲ ညအိပ်ရလို့ အပိုကုန်ပါတယ်.. ဘန်ကောက် ကနေ Male ကိုတော့ Air Asia စဆွဲတာ သိပ်မကြာသေးပါဘူး .. သူကတော့ Male ကိုရောက်တဲ့ အချိန်တော်တော်ကောင်းပါတယ်.. နေ့လည်ဘက်ရောက်လို့ ကျွန်းကူးတဲ့အချိန်အဆင်ပြေတယ်.. မပြေတာ တစ်ခုကတော့ အသွားရော အပြန်ရော ဘန်ကောက်မှာ တစ်ည အိပ်ရမှာပါ..ဘန်ကောက်ကနေ မနက် 9:30 ထွက်ပြီ.. Male ကနေ ဘန်ကောက်ကို ည7နာရီမှ ပြန်ရောက်လို့ ရန်ကုန်ပြန်မယ့်လေယာဉ်မမှီပါ.. ဒါကြောင့် ဘန်ကောက်မှာ အသွားအပြန် ၀င်အိပ်ရပြီး Check-in လဲပြန်ဝင်ရမှာပါ..စျေးကတော့တော်တော်ပေါပါတယ်.. Maldives ထိအရောက်ကို ကြိုဝယ်ထားရင် 400$ လောက်နဲ့ရပါတယ်..Budget Airဆိုတော့7kilo ပဲရပြီးလေယာဉ်ပေါ်မှာတော့ ဘာမှမကျွေးပါဘူး.. ဟိုမှာက ဓါတ်ဖမ်းဖို့ အကျီင်္တွေအများကြီး ယူသွားမှာဆိုတော့ ကီလို ၀ယ်ရင် တစ်ယောက်စာ ၂၀ ကီလို ထပ်ဝယ်ပြီး ၂ ယောက်လောက် share လို့တော့ ရမှာပါ..Bangkok Airwaysရဲ့promotion ရှိတဲ့ရက်တွေဆို AirAsiaကီလိုဝယ်မှာနဲ့ ဘန်ကောက်မှာ အိပ်ရမယ့်စရိတ်နဲ့ဆို သိပ်မကွာပါဘူး..
Resort တစ်ခုကို တစ်ကျွန်း ဖြစ်နေတဲ့ Maldives မှာ စျေးသက်သာတာရှာချင်ရင်တော့ ဒေသခံကျွန်းတွေကို သာရွေးရမှာပါ.. ဒေသခံကျွန်း တွေဆိုတာနဲ့ ဒေသခံတွေရော.. ဟိုတယ်တွေရော ရှိနေတဲ့ ရွာငယ်လေးလို ဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်းမျိုးတွေပါ.. စတိုးဆိုင်တွေ..စားသောက်ဆိုင်တွေ.. တိ်ုးတွေ ပါထွက်တဲ့ကျွန်းမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်.. Resort တွေရှိတဲ့ ကျွန်းတွေလို ဓါတ်ပုံတွေထဲ က Maldives လို အိမ်လေးတွေ ရေပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ လှနေတဲ့ ကျွန်းမျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူး.. တချို့ကျွနး်တွေဆို ဒေသခံတွေ နေတဲ့အတွက် bikini ၀တ်ခွင့်ရတဲ့ နေရာမှာမှ ၀တ်လို့ရပါတယ်.. ဒေသခံတွေ နေတဲ့ ကျွန်းတွေအများကြီး ရှိတဲ့ထဲကမှ ကိုယ်ကတော့ လေဆ်ိပ်ကနေ သွားလာရမဝေးတဲ့ နာမည်ကြီး စိတ်ချရတဲ့ ကျွန်းလေးတွေရွေးပေးလိုက်ပါမယ်.. အဲ့ဒီကျွန်းတွေကတော့ Gulhi Island ( 80 minutes boat ) , Guraidhoo Island ( 110 minutes boat ) , Thulusdhoo Island ( 140 minutes boat ) Maafushi Island ( 90 minutes boat ) တို့ဖြစ်တယ်..အဲ့ဒီလေးကျွန်းထဲက ကိုယ်ဘယ်ကျွန်းကို ရွေးခဲ့သလဲလို့မေးရင် .. အဲ့ဒီ ကျွန်းတွေပေါ်မှာ ဟိုတယ် ဘယ်နှစ်လုံး ရှိလဲ ရှာလိုက်တော့ Gulhi Island နဲ့ Guraidhoo မှာ ဟိုတယ်6လုံးစီလောက်ပဲ ရှိတော့ ဒေသခံတွေ အရမိးများနေရင် မနေချင်တာနဲ့ပဲ.. Thulusdhoo Island နဲ့ Maafushi ထဲကပဲ ပြန်ရွေးလိုက်တယ်..
Thulushoo Island : လေဆိပ်ကနေ နှစ်နာရီနီးပါမောင်းရတဲ့ ဒီကျွန်းကတော့ ဒေသခံကျွန်းတွေထဲမှာ တော်တော်လှတဲ့ ကျွန်းပါ.. သဲသောင်ပြင်တော်တော်ကျယ်ပြီး ရေလဲတော်တော်လှတယ်.. ဟိုတယ်ကတော့ 10လုံးလောက်ရှိတယ်.. ကိုယ်ဘာလို့သူ့ကို မရွေးခဲ့လဲလို့မေးရင် လေဆိပ်ကနေ ကျွန်းအထိ speed boat က တနေ့ တစ်ကြိမ်ပဲထွက်ပြီး တစ်ကြောင်းကို 46$ မို့စျေးကြီးတယ်ထင်ပြီးမရွေးခဲ့တာပါ..
Maafushi Island : ဒါကတော့ကိုယ်တွေနေခဲ့တဲ့ ကျွန်းပါ.. ကျွန်းကတော့ပြောရရင်သိပ်အလှကြီးမဟုတ်ဘူးရယ်.. Bikini ၀တ်လို့ရတဲကမ်းခြေဆိုလဲ ကျဉ်းပါတယ်.. ဒါပေမယ့်ဘာလို့ သူ့ကို ရွေးလဲမေးရင် သူ့ကျွန်းဟာ ကြီးလို့ ဟိိုတယ်တွေက 27 လုံးတောင်ရှိပါတယ်.. Maldives မှာရှိတဲ့ အကြီးဆုံး ကျွန်းလို့တောင် ပြောလို့ရပြီး မြို့တစ်မြို့လိုတောင်ဖြစ်နေလို့ လိုတာဝယ်လို့ ရ ..စားသောက်ဆိုင်တွေလဲပေါ.. တိုးရစ်တွေလဲ အများကြီးမို့ ရွေးခဲ့တယ်..ရဲစခန်းလဲရှိတယ်.. ဆေးရုံအသေးစားလေးလဲရှိပါတယ်.. နောက်ပြီး လေဆိပ်နဲ့လဲ 1 နာရီခွဲ မောင်းရလို့ သိပ်မဝေးဘူးရယ်.. ဟိုတယ်ကောင်းကောင်းတွေလဲကျွန်းမှာရှိတယ်.. ကိုယ်တွေနေခဲ့တဲ့ ဟိုတယ်ကတော့ တည 65 $ ပဲပေးရပါတယ်.. Booking.com ကနေတင်လိုက်တာပါ.. Breakfast လဲပါ..ရေကူးကန်ပါပါလို့တော်တော်လေးကောင်းတယ်.. တခြားသူ့ထက်မိုက်တဲ့ Hotel တွေလဲရှိတယ်.
လေဆိပ်ရောက်ရင် .. ✈️
Resort တွေမှာနေရင်တော့ လေဆိပ်ရောက်ရင် ကျွန်းတွေက်ို ဘာနဲ့ကူးမလဲဆိုတဲ့ ကိစ္စက သူတို့တွေက လာကြိုလို့ ခေါင်းစား စရာမလိုပေမယ့် ဒေသခံကျွန်းတွေမှာနေရင်တော့ ခေါင်းစားရပါတယ်..Ferry လိုမျိုးလဲရှိပြီး စျေးသက်သာပေမယ့် ကျွန်းအထိရောက်ဖို့ တစ်နာရီခွဲ ကြာပါတယ်.. နောက်ပြီး တစ်နေ့ကို တစ်ချိန်ိ ညနေ3နာရီမှာ ထွက်ပါတယ်.. လေဆိပ်ကထွက်ထွက်ချင်း ကားငှားပြီး Maafushi Ferry ဆိုက်တဲ့ Jetty ကိုပို့ခိုင်းရပါတယ်. .ပြီးရင် Boat မထွက်ခင် တစ်နာရီလောက်ကြိုစောင့်နေရပါမယ်.တစ်ယောက်ကို3US$ ပဲပေးရပါတယ်.. ကျွန်းကနေတော့ မနက် 7:30 မှာ ပြန်ထွက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်..Air Asia နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ လေယာဉ်ချိ်န်နဲ့ နဲနဲဝေးလို့ စောင့်ရပါမယ်..
မစောင့်ချင်ဘူး စျေးလဲပိုပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်နောက်တစ်နည်းကတော့ speed boat သုံးလို့ရပါတယ်.. သူကတော့ online ကနေ ကြိုပြီး booking လုပ်ရမှာပါ.. https://icomtours.com/ ဒီ website ထဲမှာသွားပြီ book လုပ်လို့ရပါတယ်.. တစ်ယောက်ကို 25 $ ပေးရပြီး သူကတော့ ကျွန်းအထိကို 45 မိနစ်သာကြာပါတယ်.. လေဆိပ်မှာထဲက သူတို့ icom tour ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်နဲ့လာကြိုနေပြီး Resort ကလို ပဲ သူတို့ကျွန်းဆီပို့ပေးပါတယ်.. အပြန်ကိုတော့ ကျွန်းမှာရှိတဲ့ icom tour မှာပဲ ကြိုပြီး booking လုပ်လို့ရပါတယ်..
ဘယ်တွေလည်မှာလဲ .. 🌸
ကျွန်းပေါ်မှာကတော့လမ်းလျှောက်သွားရုံပါပဲ..ကမ်းခြေသေးသေးလေးမှာ ရေကူး အုန်းပင်တွေနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်စတာတွေလုပ်လို့ရပါတယ်.. ရောက်တဲ့နေ့ကတော့ လေယာဉ်လဲစီး ဘုတ်တွေလဲစီးခဲ့ရလို့ခရီးပန်းလာလို့ဘယ်မှမသွားပဲ ကျွန်းမှာပဲ အေးဆေးနေလို့ရပါတယ်.. နောက်နေ့လည်ဖို့ မေးလို့ရတဲ့ ကျွန်းပေါ်မှာပဲ တိုးတွေရှိပါတယ်.. မေဇွန်တို့ကတော့ Icom Tour နဲ့ပဲကျွန်းကိုလာခဲ့လို့ သူတို့နဲဲ့ပဲချိန်ခဲ့တာ.. တော်တော်လေး service ကောင်းတယ်..
Snorkeling , Turtle Reef , Sand Bank , Dolphin Watching 🏊🏻💦
ဒါတွေအကုန်လုံးပါတဲ့ Package ကိုမှ တယောက် 35$ ပဲပေးရတာပါ..တော်တော်တန်ပါတယ်… အအေးတွေရော အသီးတွေပါလမ်းမှာ ကျွေးသေးတယ်.. Snorkeling ကတော်တော်လေးမိုက်တယ်.. Maldives ရေအောက်ကမ္ဘာဟာ ထင်မထားလောက်အောင်ကိုလှတာပါ.. ငါးတွေဆိုတာ အုပ်လိုက်ကြီးကိုယ့်ဘေးမှာ ..နီမို လေးတွေရော.. ကိုယ့်မှာ ဟိုငါးအုပ်နောက်လိုက် လိုက် ဒီငါးအုပ်နောက်လိုက်လိုက်နဲ့ ပဲ လှလွန်းလို့ ပြန်ကို မတက်ချင်တော့တာ..
Turtle Reef : ဒါကတော့လိပ်တွေနဲ့ ပင်လယ်ထဲမှာရေကူးတာပေါ့.. ချစ်စရာ ယက်ကန်ယက်ကန်လေးတွေနဲ့ တခါမှ ရေမကူးဘူးဖူး…ချစ်ဖို့တအားကောင်းသလို သူတို့နောက်လိုက်ရတာလဲပျော်ဖို့ကောင်းတယ်..
Dolphin Watching : ကိုယ့်လှေရှေ့မှာ သူတို့လေးတွေ ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်နဲ့ ရေပေါ်ခုံတက်လာလိုက်လုပ်နေတာကို ကိုယ့်မှာ လှေပေါ်ကနေ ကြည့်ရတာ အားကိုမရတာ.. အနားကပ်လာရင် သူတို့ အော်သံလေးတွေက ကလေးသံလေးတွေလို ကြားရတယ်..
Sand Bank : ဒါကတော့ လူမနေတဲ့ ကျွန်းတွေကိုသွားတာပေါ့ ..အဲ့ဒီမှာတော့ Blue Lagoon တွေရှိတတ်တယ်.. ပင်လယ်ကြီးပေါ်မှာ သဲနည်းနည်းလေးပဲ ပေါ်နေတဲ့ ကျွန်းတွေပေါ့.. ကိုယ်တွေကြီးပဲရှိလို့ private ကျွန်းလိုဖြစ်နေတာပေါ့.. Pre wedding ရိုက်မယ့်လူတွေလဲ ဒီကျွန်းတွေ ချည်း သီးသန့်ပို့ခိုင်းလို့ရတယ်..
နောက်ပြီး ရေထဲမှာဓါတ်ပုံ ရိုက်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်လဲ သူတို့က Go-Pro တွေဘာတွေယူလာပေးပြီးရိုက်ပေးတယ်.. အဲ့ဒါတော်တော်လေးကောင်းတယ်.. ပိုက်ဆံပေးစရာလဲမလိုပါဘူး..
နောက်တနေ့ကျရင် ဘယ်သွားနိုင်လဲဆိုရင်တော့ resort တွေကို visit သွားနိုင်တယ်.. ကိုယ်က ပိုက်ဆံ အများကြီး မတတ်နိုင်လို့ Private resort မနေပေမယ့် အဲ့ဒီ ကျွန်းတွေပေါ်ကို Day visit သွားလို့ရတယ်.. သူတို့တိုးမှာ အဲ့ဒါတွေအားလုံးဝယ်လို့ရတယ်..
Resort Day visit ဆိုတာက ကိုယ်က resort ရဲ့ feeling မျိုးရချင်တယ် ရေပေါ်အိမ်လေးတွေနောက်ခံထားပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်တယ် ၀ိုင်.. ဘီယာ..ကော့တေး.. ၀ီစကီ.. တမုန်းသောက်ချင်ရင် သွားလို့ရပါတယ.်.. အဲ့လိုသွားလို့ရတဲ့ Resort 10 ခုလောက်ရှိပြီး မိမိ ကြိုက်ရာကိုရွေးပြီးသွားလို့ရပါတယ်.. မနက် 8 နာရီ ကိုယ့်ကျွန်းကနေ စထွက်ပြီး ကိုယ်ရွေးထားတဲ့ Resort ကိုရောက်ပါတယ်.. နေ့လည်စာ ဘူဖေး ပါ၀င်ပြီး.. အဲ့ဒီresort ရဲ့ ပေးထားတဲ့ activity တွေရော ရေကူးကန်တွေရော.. တချို့ resort တွေဆို ငါးမန်းအစာကျွေးတာတွေပါပါတယ်.. စျေးနဲ့ချိ်ပြီး စိတ်ကြိုက် resort ရွေးလို့ရတယ်.. Pre Wedding ရိုက်မယ့် လူတွေ နဲ့ ဓါတ်ပုံ များများ ရိုက်မယ့်လူတွေက ဒါကို ရွေးတာ မိုက်တယ်.. ဘာလို့ဆိုရင် Resort တခုမှာပဲ တည်းရင် အဲ့ဒီ Resort ကပုံပဲ ရမှာ မို့လို့ပါ.. အခုကတော့ Resort တစ်ခုပြီးတစ်ခု တစ်နေကုန်နေပြီး ရိုက်နေလို့ရပါတယ်.. Resort Day visit က အနည်းဆုံး တစ်ယောက်ကို 100$ ကနေ 150 $ အထိ resort လိုက်စျေးကွာပါတယ်..
Whale Shark 💦
ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေထဲကတစ်ခုကတော့ Whale Shark ကြီးနဲ့ ပင်လယ်ထဲရေကူဖို့ပါပဲ.. Maldives မှာစျေးတော့ကြီးတယ် ..တစ်ယောက်ကို 100$ ပေါ်ရတယ်.. ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ရဲ့ Bucket list ဖြစ်နေတော့လဲ မနှမြောနိုင်ပါဘူး.. မနက် 8 နာရီထဲက ကျွန်းကထွက်ခဲ့တာ လှေက3နာရီလောက်စီးရတယ်.. လမ်းမှာ ဥသြတွေ ဆွဲတာဆွဲတာဆိုတာလေ.. လိူင်းကတော်တော်ကိုမူးတာ.. Maldives က Whale Shark က တချို့နိုင်ငံတွေမှာလို Tour Site တစ်ခုအနေနဲ့ ပြစားတာမျိုးမဟုတ်ပဲ.. တကယ့်ပင်လယ်နက်ကြီးကို သုံးနာရီလောက်ဖြတ်ပြီး သူရှိတဲ့ နေရာကို အမဲလိုက် သလိုမျိုး လိုက်သွားပြီး တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ ခုန်ချရတာ..
သူများတွေလှေပေါ်က ခုန်ဆင်းသွားကြပီ.. ကိုယ်ကနောက်ဆုံးမှ ..
ဗွမ်း... ဆိုပြီး ခုန်ချလိုက်တာ.. ရေထဲကျသွားလို့ မျက်စိကို မှိတ်ထားရာက ပြန်လဲဖွင့်ရော.. အရှေ့တည့်တည့်မှာ ... နည်းတဲ့အကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူး.. ပါစပ်ကို ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်နဲ့... ကိုယ့်ဘေးကနေဖြတ်သွားတာ... ကိုယ့်ထက် ၅ ဆလောက်ကြီးတဲ့ Whale Shark ကြီး...သူ့နောက်ကို ရေကူးပြီး လိုက်သွားတာ..သူတို့ကို သဘာဝအတိုင်း မြင်တွေ့ရတာ ကျေနပ်ဖို့ကောင်းလေစွ..ဓါတ်ပုံတောင် မနည်းလိုက်ရိုက်ရတယ်..လိူင်းတွေမူးပြီး သူ့နောက် အမောတကော လိုက်နေတာနဲ့ပဲ ကိုယ်နဲ့ တူတူတောင် မရိုက်လိုက်ရဘူး..
လိူင်းမူးတတ်ပြီးရေသိပ်မကူးတတ်ရင်တော့ ဒါကို သွားမကြည့်ပါနဲ့လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်.. ခရီးစဉ်ကတစ်နေကုန်ပါတယ်.. ကို်ယ်ကတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူနဲ့တူတူ သဘာဝအတိုင်း ရေကူးမယ်ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်မက် ပြည့်ဝသွားခဲ့ပီ..
ကျွန်းမှာတခြား Night Fishing တို့ဘာတို့လဲရှိပါသေးတယ်.. အချိန်ရရင်သွားလို့ရပါတယ်.. တယောက်ကို မှ 25$ ပါ..
မနက်စာက ဟိုတယ်မှာ ကျွေးပါတယ်.. နေ့လည်စာနဲ့ ညစာကတော့ ကျွန်းမှာ စားသောက်ဆိုင်တွေအများကြီးပါ.. ညဘက်ဆိုရင်တော့ ဘူဖေးတွေတော်တော်များများရတယ်.. တယောက်မှ 12$ , 13$ လောက်ပဲရှိပါတယ်.. Resort visit မှာတော့နေ့လည်စာပါပြီးသားပါ..
အဓိက ပြသနာကတော့ ကျွန်းမှာ Alcohol မရတာပါ.. ကျွန်းရဲ့ ဘယ်ဟိုတယ်မှာမှမရပါဘူး.. သောက်ချင်ရင်ကျွန်းရဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ သဘောင်္လေးတွေရပ်ထားပေးတယ်.. ကိုယ်တွေအဲ့ဒီကို လှေသေးသေးစီးပြီးသွားတာ ညဘက်ဆိုတော့ ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်… မတော်တဆ မြုပ်သွားရင်..  ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာတော့ သွားမသောက်ပါနဲ့.. သွားချင်ရင် ညနေစောင်းလောက်မှ အဆင်ပြေမှာပါ.. သောက်ချင်ရင်တော့ Resort visit သွားတဲ့နေ့မှပဲသောက်ပါလို့စ်
ဒါဆိုရင်တော့ Malidives မှာသုံးညနေမယ့်လူတွေအတွက် အဆင်ပြေလောက်ပါပြီ..
ပထမနေ့က လေဆိပ်ကနေကျွန်းအထိလာရလို့ ညနေ3နာရီလောက်မှ ရောက်တဲ့အတွက်ပင်ပန်းနေပြီး ကျွန်းမှာပဲ ဓါတ်ပုံလေးတွေရိုက်ရေကူးလို့ရပါတယ်.. လေဆိပ်မှာပဲ ဖုန်းကဒ်ဝယ်လို့ရပါတယ်.
ဒုတိယနေ့ကတော့ Snorkeling , Turtle Reef , Sand Bank , Dolphin Watching စတဲ့ 35 $ တန် Package ကိုဝယ်ပြီးသွားပါ..6နာရီကြာပါတယ်..
တတိယနေ့ကတော့ Resort Day Visit ကိုသွားပါ..တနေကုန်ပြီး ညနေ6နာရီမှ ပြန်ရောက်မှာပါ..
လေးရက်မြောက်နေ့ကတော့ ကျွန်းကနေ လေဆိပ်ပြန် ပြီး ဘန်ကောက်ထိလေယာဉ်စီါ်လာနိုင်ပါပြီ
အဲ့ဒီ3ည အိပ်4ရက်ကို လေယာဉ်လက်မှတ်ပါအပါမှ တစ်ယောက် 800$ ကျော်ကျော်လေးဆိုလောက်ပါပြီ.. လေယာဉ်ကိုတော့ ကြိုဝယ်ထားဖို့လိုပြီး လာကြိိုမယ့် boat ကို ကြိုချိတ်ထားဖို့လိုပါမယ်..
Resort visit တွေထပ်လုပ်ချင်ရင်..ဓါတ်ပုံတွေထပ်ရိုက်ချင်တယ်.. ရက်လဲထပ်တိုးချင်တယ် နောက်ရက်တွေထပ်နေပြီး ကိုယ့် Budget နဲ့ချိန်ပြီး တစ်နေ့ကို Resort တစ်ခုသွားလို့ ရပါတယ်.. တစ်ရက်စာ ထပ်ကုန်ငွေ 150$ လောက်ရှိပါမယ်..
ကိုယ်တွေလို ကျွန်းမှာ သုံးညအိပ် ပြီး Resort မှာ နှစ်ည လောကထပ်် ဇိမ်သွားခံချင်ရင်တော့ ကုန်းပေါ်ခန်း နှစ်ည All Inclusive တယောက်ကိို 700 $ လောက်နဲ့ ရေပေါ်ခန်းကို တယောက် 1000$ လောက်ထပ်တွက်နိုင်ပါတယ်
• အရက်လုံးဝသယ်သွားလို့မရပါ.. လေဆိပ်မှာသိမ်းထားပြီး ပြန်မှ ပြန်လည်ထုတ်ပေးပါတယ်.
• ဆေးလိပ် အလွန်စျေးကြီးလို့ ၀ယ်သွားပါ..
• Shopping မရှိပါဘူး.. ဟိုရောက်မှ ၀ယ်ဝတ်လို့မရပါ.. ဒါကြောင့် ရေကူးဝတ်စုံ ရော ဓါတ်ပုံရိုက်မယ့် အဝတ်အစား .. ဦထုပ် စတာတွေသယ်သွားပါ
• Sun Cream တွေ နဲ့ Lotion တွေအားလုံးယူသွားပါ
• ဓါတ်ဆားထုတ်တွေယူသွားပါ… လှေတွေစီးပြီး ပင်လယ်နက်ထဲမှာ ရေငုပ်လိုက် နေပူခံလိုက်နဲ့မို့ မူးတတ်ပါတယ်..
• Speed boat နဲ့မဟုတ်ပဲ Ferry တွေနဲ့ ကျွန်းကိုသွားမည့်သူများသောကြာနေ့ကိုရှောင်ပါ.. သူတို့ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်လို့ Ferry မထွက်ပါ
• ဒေသခံကျွန်းမှာ Bikini ၀တ်လို့ရတဲ့ နေရာသတ်မှတ်ထားပါတယ်.. အဲ့ဒါကိုသတိထားပါ.. အဲ့ဒီ ကမ်းခြေကလွဲလို့ တခြားမှာဝတ်လို့မရပါ..
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ပထမ ပိုစ့်မှာ Luxury ဒုတိယ ပိုစ့်မှာ Budget ဘယ်လိုသွားနိုင်လဲဆိုတာသိလောက်ပြီထင်ပါတယ်..  boat တွေ တခြား package တွေ booking တင်ချင်တယ် မလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်တော့ cb မှာလာပြောပါ.. အားတဲ့အချိန်တွေ ကူပြီးတင်ပေးပါမယ်..
ဦးပိန်မည်သော တံတား သမိုင်း (ဦးပိန်တံတား သမိုင်း) ..!
By : ဖိုးသူတော်
ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျူးလွန်သူ နှစ်ဦးကို အရေးယူပေးဖို့ YBS ယာဉ်မောင်းက တရားရုံးထံ ဦးတိုက်လျှောက်
By : သစ်ထူးလွင်
ဟိုင်နန်းကျွန်း သွားလည်မယ့်သူတွေ ဗီဇာလျှောက်ရန် မလိုတော့
သင်မကြားဖူးသေးတဲ့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေအတွက် ဆွဲဆောင်မှု အရှိဆုံးရိုးရာပြိုင်ပွဲများ
ချင်းပြည်နယ်က အသည်းပုံ ရိဒ်ရေကန်အကြောင်း
သိပ်လှပြီး Perfect ဖြစ်တဲ့ မိန်းခေးတစ်ယောက်ဆိုတာ
သြစတြေးလျ မှ ဟက်ကာများကို ငှားရမ်းသွားမယ့် Google
Professional Camera တွေကို အသုံးပြုပြီး PC မလိုပဲ Live Streaming ပြုလုပ်လိုပါသလား
Samsung စမတ်ဖုန်းသစ် Galaxy Note 8 ကို စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်သင့်တဲ့ အကြောင်းရင်းခုနစ်ခု
ဘုရားစင်ပေါ်က ဘုရားပန်း မညိုးပါစေနဲ့ သောက်တော် ရေချမ်းလည်း မနွေးပါစေနဲ့
ကုလမဟာမင်းကြီးခရီးစဉ် ရခိုင်ဒေသ ဒုက္ခသည်တွေကြိုဆို
သင်သတိမထားမိတဲ့ အချိန်မှာပဲ ကိုယ်အလေးချိန် ကျသွားစေမယ့် အမူအကျင့် ၉ ချက်
မြိတ်တွင် သိရိမင်္ဂလာ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းရှိ အလှူခံပုံများ ဖောက်ထွင်းခံရ
လူတစ်ယောက် သင့်အကြောင်း အိပ်မက်မက်စေချင်ရင် ဒါတွေလုပ်ကြည့်ပါ
ကမ္ဘာကြီးပေါ်က အလှဆုံးသော ကျွန်းလေ ဆန်တိုရိနီ..
မြန်မာပြည်ရဲ့ လူပျိုစင် ညောင်ဦးဖီးကျွန်း
ကော့သောင်း/ရနောင်းမြို့ပတ် - ကြက်မောက်ကျွန်း၊ စေတန်ကျွန်း၊ ဇာဒက်ကြီးကျွန်း Snorkeling ခရီးစဉ်
© COPYRIGHT 2017 Thadinsone Tm